Wzọ 8 maka tomepụta Ọdịnaya Na -emepụta Ndị Ahịa | Martech Zone
Izu ole na ole gara aga, anyị na-enyocha ọdịnaya ndị ahịa anyị niile iji chọpụta ọdịnaya nke na-eme ka anyị mara, itinye aka na mgbanwe. Companylọ ọrụ ọ bụla nke na-atụ anya inweta na-eduga ma ọ bụ na-azụlite azụmaahịa ha na ntanetị nwere ọdịnaya. Trusttụkwasị obi na ikike ịbụ igodo abụọ maka mkpebi ịzụta ihe ọ bụla yana ọdịnaya na-eme mkpebi ndị ahụ n'ịntanetị.
Nke ahụ kwuru, ọ na-achọ nyocha ngwa ngwa na nke gị nchịkọta tupu ị chọpụta na imirikiti ọdịnaya anaghị adọta ihe ọ bụla. Nyere ego ị ga-eji wuo saịtị, ịkwalite saịtị ahụ, nyocha ahịa gị, na ịmịpụta ọdịnaya ahụ - ọ bụ ihe ihere na ọ naghị agụkarị ya.
Anyị na-elekwasị anya na atụmatụ anyị maka ndị ahịa nke afọ a ka ọ bụrụ na ọdịnaya ọ bụla abụghị ego dị egwu. Wayszọ ole na ole anyị na-arụ ọrụ iji bulie ọdịnaya ndị ahịa anyị:
Aggregation - Kemgbe ọtụtụ afọ, ụfọdụ ndị ahịa anyị achịkọtala isiokwu iri na abụọ niile lebara anya na isiokwu yiri ya. Anyị na-etinye ihe ndị ahụ n'ime isiokwu zuru ezu nke edoziri nke ọma ma dịkwa mfe maka ndị na - agụ ya. Mgbe ahụ, anyị na-ebugharị URL niile a na-ejighị ya na ederede zuru ezu ma bipụta ya dị ka nke ọhụrụ yana URL kachasị mma.
Mbugharị - offọdụ ndị ahịa anyị na-ewepụta akụkọ, pọdkastị, na vidiyo - iche iche. Nke a dị oke ọnụ ma bụrụ enweghị isi. Otu n'ime mmemme anyị wuru nwere onye ahịa anyị otu ugboro n'ọnwa ka ịdekọ pọdkastị ole na ole. Mgbe anyị na-edekọ pọdkastị, anyị na-agbakwa ha na vidiyo. Mgbe ahụ, anyị na-eji nsụgharị nke ajụjụ ọnụ ndị ahụ iji nye ndị edemede anyị nri iji mepụta ọdịnaya ahụ. Dika arụmọrụ ọdịnaya na-abawanye, anyị nwedịrị ike iji infographics na ọcha na-agbasa na nzaghachi ma kwalite nkwalite iji gbasaa iru ha.
Enhancement - Edeela ọtụtụ ederede ha nke ọma mana ha agafebeghị ma ọ bụ enweghị foto. Anyị na-arụ ọrụ iji melite isiokwu ndị ahụ, anyị na-ebipụtakwa ha n'otu URL ahụ dị ka isiokwu ọhụrụ. Gini mere edere ederede ohuru ohuru maka isi okwu nyere maka mgbalị a etinyegoro?
Ihe ndị a bụ naanị atụmatụ atọ anyị ji azụlite ọdịnaya nke na-eme nke ọma. Onye ọrụ anyị, Brian Downard, achọpụtala ụzọ ụfọdụ akọwapụtara iji mepụta ọdịnaya na -emepụta ndị ahịa na ozi ọhụụ ọhụrụ ya, Wzọ 8 iji mepụta ọdịnaya nke imepụta ndị ahịa:
Mepụta ọdịnaya maka ịmara ụdị NA maka ahịa - Emela naanị ọdịnaya na ebumnuche nke ịdọta ndị na-agụ, mepụta ọdịnaya nke na-atọghata na ahịa.
Zaa ajụjụ "tupu ịzụta" na ọdịnaya - Mepụta ọdịnaya gburugburu ajụjụ ụfọdụ ị na-enweta site na atụmanya gị na ndị ahịa gị mgbe niile.
Mepụta ọdịnaya "evergreen" na akụrụngwa - Họrọ isiokwu gị nke ọma, yabụ ọdịnaya gị agaghị efufu uru ya ọnwa ole na ole ka emechara ya.
Mee ka ọdịnaya ziri ezi dị na mgbasa ozi akwụ ụgwọ - Na-akwalite ọdịnaya ịmara nke ọma na "weghachite" ndị na-agụ ya na ọdịnaya gị gbadoro ụkwụ.
Mepụta ndị ọdịnaya nwere ike inwe - Mee ka ọdịnaya gị dị oke mkpa dị ukwuu site na itinye ya na PDF enwere ike budata.
Mepụta "oghere ihe ọmụma" ndị mmadụ chọrọ imeju - Ọdịnaya gị kwesịrị inye uru mgbe ị ka na-ahapụ "cliffhanger" nke na-eme ka ndị mmadụ chọọ ịmatakwu.
Nweta nkwalite gị egwuregwu na ọkachamara ndịna - Ọtụtụ n’ime anyị abụghị ndị ezigbo ọkaibe. Kama, chọta ma zụta ihe onyonyo na eserese emere maka ọdịnaya gị.
Gụnye ike, mara ihe Kpọọ ka ime ihe - Ahapụla ndị na-agụ akwụkwọ gị ka ha kwụwa ọtọ, nye ha ihe doro anya ị ga-eme ka ha nwee ike ịme nzọụkwụ ọzọ.
N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka - kpachara anya ịlele otu n'ime Brian dị ukwuu klaasị ma obu inwere ike iku iku ụlọ ọrụ anyị!
Tags: Brian Downardkpọọ ka emeọdịnaya ọdịnayaihe di n’imecontent Marketingnkwalite ọdịnayakee ndi ahiactaahịadesignmgbe ọ bụlaevergreen ọdịnayandịnaakwụ ụgwọ mgbasa ozitupu ịzụtaimewe ọkachamaramkpebi ịzụtaọdịnaya ahịa